Ukuqinisa isandla kubaholi kunzima | Scrolla Izindaba
Ukuqinisa isandla kubaholi kunzima
Amazwe amaningi asebone oNgqongqoshe bakahulumeni kanye nezikhulu bephula imithetho yomvalelo.
ENingizimu Afrika, uNgqongqoshe wezokuxhumana uStella Ndabeni-Abrahams wamiswa izinyanga ezimbili ngumengameli uCyril Ramaphosa ngemuva kokuthi ebanjwe ephula imithetho yomvalelo.
ENamibia, izikhulu zeqembu elibusayo le-SWAPO kanye nomengameli babanjwa oqotsheni benza idili lokugubha isikhumbuzo ephalamande. Ngenkathi sibika ukuthi wonke umuntu ubanjiwe, kubalwa nomengameli bakhokha imali eyizi-N$ 2000.
Kwabukeka sengathi uhulumeni wakujabulela ngokulungile lokhu.
Manje imibiko yephephandaba i-The Namibian ithi sekunodweshu ngoba yinhlangano ye-SWAPO uqobo ekhokhe isinxephezelo esiyizi-N$ 2000 kuphela ngabantu abangama-25 lapho!
Isibonelo esibi kakhulu kuze kube manje iseBrithani. Umeluleki ophezulu kaNgqongqoshe ophethe umbuso wezwe naye wabanjwa ephula imithetho yomvalelo ngokuhamba nomndeni wakhe ukuya emaphandleni kodwa enazo izimpawu. Umeluleki uDominic Cummings wabese eza nezaba elibulale iningi labantu ngensini. Yize kube nehlazo elikhulu kangaka akwenzakalanga lutho kuCummings. Abantu abaningi baseBrithani bathi lokhu kwenzeka lesi sigameko abasayithatheli phezulu imithetho yomvalelo.